Madagascar: RALAIZAZAROHAVANA Amelie Pauline - Gender Links
Emerging Entreprenuers Madagascar: RALAIZAZAROHAVANA Amelie Pauline...
Madagascar: RALAIZAZAROHAVANA Amelie Pauline
“Volivoanjo nampiana varotra confection eny Ambanivohitra manaraka androtsena sy ny vokatra miakatra”
Pauline dia monina ao amin’ny tanànan’I Morondava, faritra Menabe. Nihaona voalohany tamin’ny atrikasa momba ny miralenta izy tao amin’ny iray amin’ireo atrikasa nokarakarain’ny filankevitra ho an’ny ivon’ny tetik’asa ambony. Tamin’izany fotoana izany dia mpikambana ao amin’ny fikambanan’ny vehivavy eo an-toerana izy. Avy eo izy dia nanaraka ny fampiofanana momba ny fandraharahana tamin’ny 2014.
Tanatin’ny enim-bolana farany dia nahazoana fidiram-bola 477 USD. Nandany 402 USD izy ary nahazo tombony 75 USD. Tanatin’ny enim-bolana manaraka dia nahazoana fidiram-bola 712. Nandany 502 USD izy ary nahazo tombony amin’ny 210 USD.
Taorian’ ny fampiofanana dia nanomboka tetikasa voly voanjo sy confection I Pauline. Nahazo ny fitaovana sy zavatra ilaina izy hampandehanana ny tetikasany. Talohan’ny fampiofanana izy dia tsy dia nisy zavatra nahomby. Nanao asa kely teny.Nanarama olona izy teo amin’ny tetikasany amin’ny fitaomana ny entana.
Voly voanjo: Elaela vao nahita tany novolena (nofaina)Samy manadio ny taniny daolo ny rehetra ka nananosarotra ny fahitana mpiasa, fa nahita ihany ny nitadiavana masomboly koa nanahirana kely; vahaolana: nividy t@ vidiny lafo.
Ny ranonorana izay tena ilain’ny voanjo tsy ampy koa t@ity taona ity. Ny Vidim-bokatra nihena be , vahaolana: miandry izay ho fiakarany
Varotra:Tsy mandeha ny varotra @ fotoam-pambolena, mihemotra koa ny varotra rehefa ambany ny vidim-bokotra, vahaolana: mitety tsena mandehandeha mivezivezy.
Taorian’ny fampiofanana dia afaka mampiasa ordinatera i Pauline ary nanokatra adiresy imailaka. Na izany aza, tsy dia mampiasa ny teknolojia aterineto izy fa mampiasa finday mba hiseraserana amin’ireo mpanjifa.